ဒမတ်စကပ်မြို့လယ်၌ စစ်တပ်သုံးဘတ်စ်ကားတစ်စင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ လူ၁၄ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့၏ အရုဏ်ဦးနှင့်ညနေဆည်းဆာ အလှမြင်ကွင်းများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဒမတ်စကပ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒမတ်စကပ်မြို့လယ်တွင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစစ်တပ်သုံးဘတ်စ်ကားတစ်စင်းပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံးလူ ၁၄ဦး သေဆုံးပြီး အခြား၂ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းSANA နိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စစ်တပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြသည့်အဆိုပါသတင်းထဲတွင် စစ်တပ်သုံးဘတ်စ်ကား၏အောက်ခြေ၌ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ကိရိယာ ၃ခုကို တပ်ဆင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိရိယာနှစ်ခုမှာဒမတ်စကတ်မြို့လယ်ရှိ သမ္မတတံတားတွင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲကျန်နေသည့် နောက်ထပ်ကိရိယာတစ်ခုအား ဗုံးရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်သူပုန်များကိုမြို့အပြင်သို့နှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပေါက်ကွဲမှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားသော်လည်းဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏မြို့တော်မှာ လုံခြုံရေးခိုင်မာစွာ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားသည့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာယခုနှစ်အတွင်းဒမတ်စကတ်မြို့၌ဖြစ်ပွားသည့်ဒုတိယမြောက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ပထမအကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုမှာသြဂုတ်လအတွင်းဒမတ်စကတ်မြို့၌ စစ်တပ်သုံးခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားတစ်စင်းကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | 14 killed in Damascus army bus explosion
DAMASCUS, Oct. 20 (Xinhua) — At least 14 people were killed and two others wounded inabomb attack on an army bus in central Damascus on Wednesday, state news agency SANA reported.
Citingamilitary statement, the report said three explosive devices were affixed to the bottom of the military bus, two of which were detonated at the President Bridge in the heart of Damascus while the third one fell down without exploding and was later dismantled byabomb squad.
Meanwhile, the state news agency posted photos ofacharred passenger bus with military personnel around it checking the situation.
The President Bridge isavery busy area in Damascus where the main transportation station, which connects the capital through dozens of buses, minibuses and minivans, is located.
The Wednesday explosion is the second but the largest that took place in the capital this year. In August,amilitary passenger bus was targeted in Damascus, causingasmaller number of casualties.